Dhibaatooyinka caafimaadka ee suuqyada iyo macaamilka akhlaaqda Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka
Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku waxay soo sheegaan tirada sii kordheysa ee maskaxda iyo xanuunka neerfaha ee dhalinyarada maanta. Daraasado badan oo dheeraad ah ayaa tilmaamaya saameynta isdhexgalka tartan ee internetka ee caafimaadka maskaxda. Tan waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya ciyaarta ciyaaraha iyo khamaarka, laakiin sidoo kale sawir-gacmeedka pornography. Baro wax badan oo ku saabsan siyaabaha Reward Foundation ee xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka.
Xaaladaha caafimaad ee khatarta ah ee khatarta ah ayaa saameynaya ragga. A dhawaan la daabacay Review by Love et al. dawladaha
"Marka laga hadlayo isticmaalka internetka, cilmi baarista neerosku waxay taageertaa fikrada ah in geeddi-socodka neerfiga ee hooseeya uu la mid yahay walxaha maandooriyaha."
Warka fiicani wuxuu yahay in si wacan loo fahmo sida maskaxdu u baddalayso xidhiidhka waayo aragnimada, dad badan ayaa ka soo kaban kara.
Hay'adda Abaalmarinta Abaal marinta waxay soo bandhigaysaa qaabab badan oo caafimaadkeenna u saameyn karo isticmaalka internetka iyo khaas ahaan internetka. Isticmaalka qaawan ee internetku wuxuu badali karaa maskaxda, wuxuu wax ka badalaa jirka bini aadamka wuxuuna dadka u horseedi karaa inay yeeshaan dabeecado galmo oo dhib badan oo ay ka mid tahay balwadda. Si fudud, sawir-qaaddadu waxay wax u dhimaysaa caafimaadka.
Isu-dheellitir iyo isu-dheellitirnaan
Waxaan sidoo kale bixinnaa ilo badan oo kala duwan oo lagu taageerayo fahamkaaga arrimaha caafimaadka. Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato aqoon isweydaarsigayaga aqoonyahanada ku saabsan Filimka Jinsiyada iyo Jinsiyadaha Galmada guji halkan.